I-china 3 oz solder mask plugging ENEPIG esindayo abakhiqizi bebhodi lethusi nabaphakeli | Kangna
I-3 oz solder mask efaka i-ENEPIG ibhodi lethusi elisindayo
Ama-PCB asindayo asetshenziswa kakhulu ezinhlelweni ze-Power Electronics ne-Power Supply lapho kunesidingo esiphakeme samanje noma kungenzeka ukuthi kusheshe kudutshulwe iphutha lamanje. Isisindo sethusi esandisiwe singaguqula ibhodi le-PCB elibuthakathaka libe yipulatifomu yezintambo eqinile, ethembekile, futhi ehlala isikhathi eside futhi lisinciphise isidingo sezinto ezingeziwe ezibiza kakhulu nezinama-bulkier njenge-Heat sinks, fans, njll.
Akukho ncazelo ejwayelekile ye-Heavy Copper PCB, imvamisa uma ubukhulu bethusi bungaphezu kuka-30z.
Ibhodi lichazwa njengebhodi lethusi elijiyile.
Ukusebenza kwebhodi lethusi elijiyile: ibhodi lethusi elijiyile linokusebenza okuhle kakhulu kokunwebeka, akukhawulelwanga ukushisa kokucubungula, iphuzu lokuncibilika okuphezulu lingasetshenziswa ukushaywa komoya-mpilo, izinga lokushisa eliphansi alinamafutha nokunye ukushisela okushubisa oshisayo, kanye nokuvimbela umlilo, kungokwalabo abangasebenzi izinto -combustible. Amapuleti ethusi akha indwangu eqinile, engeyona enobuthi, enamathela, ngisho nasezimeni zomoya ezonakalisayo kakhulu.
Izinzuzo zepuleti lethusi eliwugqinsi: Ipuleti lethusi elijiyile lisetshenziswa kabanzi ezintweni ezahlukahlukene zasendlini, imikhiqizo yobuchwepheshe, ezempi, ezokwelapha nezinye izinto zikagesi. Ukusetshenziswa kwepuleti lethusi elijiyile kunweba isikhathi sokusebenza okude kwebhodi lesifunda eliyingxenye eyinhloko yemikhiqizo yezinto zobuchwepheshe, futhi ngasikhathi sinye, kusiza kakhulu ukwenza lula umthamo wezinto zikagesi
Heating yethusi Heavy PCBs
Noma ikuphi ukukhiqizwa kwe-PCB, noma ngabe emaceleni eyodwa noma emaceleni amabili yakhiwe ngokufakwa kwethusi ukususa izindlela ezingadingeki zethusi nezokufaka ukwengeza ubukhulu bezindiza, amapayipi, nemikhondo kanye ne-Plated-Through-hole (PTH). Ukwakheka kwama-PCB anamandla ethusi kufana ncamashi nokwakhiwa kwama-PCB ajwayelekile e-FR-4 kepha adinga amasu akhethekile okugcoba nawokwenza ugesi okhulisa ukushuba kwebhodi elingaphezulu ngaphandle kokushintsha ukubalwa kwesendlalelo. Amabhodi weSurface aminyene ayakwazi ukuphatha izinsimbi zethusi ezingeziwe ngenxa yamasu akhethekile afaka isivinini esikhulu, ukuzifaka, nokuhlukanisa noma ukuphambuka.
Indlela ejwayelekile yokuqopha ayisebenzi kuma-PCB asindayo esindayo futhi idala imigqa yemiphetho engalingani kanye namamajini agqize ngokweqile. Sisebenzisa amasu we-plating athuthukile ukuthola imigqa eqondile namamajini womphetho afanele ngezindlela zokungena ezinganakwa. Inqubo yethu yokufaka okunezelwe inciphisa ukumelana neminonjana yethusi ngaleyo ndlela ithuthukise amandla aqhuba ukushisa nokukhuthazela kokucindezeleka okushisayo.
Ukwehliswa kokumelana nokushisa kuthuthukisa amandla okusabalalisa ukushisa wesifunda sakho ngokudlulisa okushisayo, ukuqhuba, kanye nemisebe. Ama-Fabricators ethu nawo agxile ekuqiniseni izindonga ze-PTH ezisebenzela izinzuzo eziningi ngokuncipha kwesibalo sesendlalelo nokunciphisa impedance, ukuphrinta ngonyawo, kanye nezindleko zokukhiqiza zizonke. Siyaziqhenya ngokuba ngomunye wabakhiqizi be-Heavy Copper Heavy PCB nabakhwalithi abasebenza kakhulu emhlabeni wonke.
Kodwa-ke, la ma-PCB afaka izindleko eziphakeme kunama-PCB ajwayelekile njengoba inqubo yokutshala inamandla futhi inzima. Amanani amakhulu wethusi adinga ukuqedwa ngesikhathi senqubo ye-Etching. Futhi, inqubo ye-lamination idinga ukusetshenziswa kwe-Prepreg ngokuqukethwe okuphezulu kwe-resin ukugcwalisa izikhala phakathi kwemikhondo yethusi. Ngakho-ke, izindleko zokukhiqiza ziphakeme kune-PCB ejwayelekile. Noma kunjalo, sisebenzisa inhlanganisela yeBlue Bar Method kanye ne-Embedded Copper indlela yokukunikeza ibhodi eliphakeme ngentengo engcono.
Ukusetshenziswa kwama-PCB wethusi asindayo
Sakha siphinde siwanikeze la ma-PCB lapho kutholakala kaningi noma ngokungazelelwe ekushiseni okuqinile kwamanje nokwengezelwe. Amazinga anjalo ngokweqile anele ukulimaza i-PCB ejwayelekile futhi abize imfuneko ye-Heavy Copper ebuye yehlise ukubalwa kongqimba, inikeze i-impedance ephansi, futhi inikeze amandla okunyathela okuncane kanye nokonga izindleko ezinkulu. Ngezansi kunezinye izindawo nezinhlelo zokusebenza ze-PCB ezisindayo ezisetshenziswa ku:
• Izinhlelo Zokusabalalisa Amandla
Amamojuli wesikhulisi samandla
• Amabhokisi we-Automotive Power Distribution Junction
• Amandla kagesi amaRadar Systems
• Izinsiza Zokushisela
• Izinhlelo ze-HVAC
• Izicelo Zamandla Enuzi
• Ukuvikelwa nokulayishwa ngokweqile
• Izinhlelo Zikagesi Zesitimela
• Abenzi bePhaneli Yelanga
Eminyakeni yamuva nje, ukufunwa kwala ma-PCB kukhuphukile ezinhlelweni zokulawulwa kwezimoto, ezempi, ezamakhompiyutha nezokulawulwa kwezimboni. U-Kangna unamava eminyaka ekukhiqizeni ama-PCB asindayo wekhwalithi ephezulu kakhulu. Onjiniyela bethu Abanekhono bazinikele ekuhlangabezaneni namazinga aphakeme kakhulu futhi bakhe ama-Premium Board ahlangabezana nokulindela ukusebenza kanye nezinhloso zenzuzo. Siyaqonda ukuthi ukuklanywa kwe-Heavy Copper PCB kuza nobunzima obungeziwe futhi ngenxa yalokho, sibhekisisa yonke imibuzo nokukhathazeka ngaphambi kokuqhubeka nomkhiqizo.
Okusenza sikhethe ngukuthi amabhodi ethu athuthukile adlula emijikelezweni ehlukahlukene yokuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthi ilethwe kumakhasimende ethu. Umnyango wethu wokulawulwa kwekhwalithi yangaphakathi uqinisekisa ikhwalithi yama-PCB asindayo futhi wenza isiqiniseko sokuthi umkhiqizo wokugcina uhlangabezana nekhwalithi enhle kakhulu engenabungozi bokuhluleka kwesifunda.
Langaphambilini Resin wokufaka imbobo Microvia Ukucwiliswa isiliva HDI nge laser imishini
Olandelayo: i-multilayer High Tg Board enebhizinisi lokucwiliswa kwegolide lemodemu